Ndeipi nzira dzinobatsira yekuvandudza Amazon kutengesa?
Mahombekiti eAmazon inzvimbo yegoridhe yemabhizimisi makuru uye maduku. Inopa mikana yekutengesa zvigadzirwa zvevanhu vanobva kune dzimwe nyika uye zvinonyanya kukoshesa mazita enyu.
Munhu wose anotaura nezvekukwikwidza kukuru kweAmazon, uye pfungwa idzi hadzina chikonzero. Mamiriyoni evatengesi vanomirira mumwe nomumwe mutengi vatsva sezvo vachiziva bhizinesi ravo - peterburi tee 46aa. Zvisinei, kune rumwe rutivi, Amazon inogamuchira vanenge vanosvika mamiriyoni 90 vashanyi pamwedzi, uye kana iwe une nzira yakanakisisa yebhizimisi rako, iwe haugoni kuramba usina kuonekwa. Maererano neAmazone makambani ekufambisa, vatengesi vepashambadzi vatsva vanowanzoona 50% kuwedzera mumari yose, apo vanotengesa kuAmaizi vachishingaira. Iyi nhamba dzinokurudzira dzinoratidza kuti munhu wose ane mukana wekubudirira muAmazon. Chinhu chipi nechipi chaunoda ndechokusimbidza uye kuziva dzimwe nzira dzekuti iwe unogona kuwedzera sei mari yako.
Muchikamu chino, tichakurukura dzimwe nzira dzakaratidza kuti ungavandudza sei Amazon yako yekutengesa uye ugare kunze kwevanhu vazhinji.
Nhungamiro yekubudirira kwekutengesa kuAmazon
Kuti uve mutengesi anobudirira kuAmazon, unofanirwa kuve nechokwadi kuti unosvika pane zvaunokwanisa. Saka, pane maitiro mashomanana anoratidza kuti ungavandudza sei Amazon yako yekutengesa.
Kupa mutambo wokukwikwidzana
Mutengo ndicho chinonyanya kukosha kuAmazon. Inoshanda semudzidzisi akatsaura mumwe mutengesi kune mumwe. Vashandi veAmazon vanogona kuenzanisa nemitengo zviri nyore, vachiwana zvakakosha zvikuru kwavari. Saka, kana iwe uchida kukunda Bhoti raNotora uye ugova pane TOP of Amazon tsvaga peji peji, unofanirwa kuva wakagadzirira kurwisana pamutengo. Iwe unofanira kufungidzira mberi kuti unogona kuderedza sei mari yako kuti urege kurasikirwa. Ingorongedza zvigadzirwa nemari yakakwana kuti uwane makwikwi emaAmerica uye uchiri kupa huwandu hwekudzorera huripo huwandu hwekutsvaga, uye mari yepamusoro. Zvakare, zvakakosha kutaura kuti kutengesa kuAmerica kunogona kuva chimiro chakanaka chekutengesa izvo zvisingadi vatengesi kutenga mabhidha-per-click ads.
Ita zvakananga pamusoro pemiti yezvibereko, kwete zvinhu
Amai Amazon anopa vatengesi vane zvikamu zvakawanda apo vanogona kuverenga maitiro avo. Iwe unofanirwa kushandisa zvidzidzo izvi zviri kuratidzika kuratidzira vatengi vako kwete chete zvikamu zvezvinhu zvako asiwo maonero avo akasimba. Ita tsananguro kune ruzivo kuti zvigadzirwa zvako zvinogona kubatsira sei vatengi nemabasa avo ezuva nezuva. Pindura vatengi vako mubvunzo "Chii chiri mukati mangu?" Uye iwe uchavaita vakavimbika kune cheki yako.
Teerera nevatengi vako
Haisi kuguma kwemutambo apo mutengi achitenga kubva muchitoro chako. Mushure maizvozvi, iwe unoda kumupa iye unyanzvi hwekambani hwekambani. Udzazisire pamusoro pekuendesa mberi uye kunyevera pamusoro pekupi kunonoka. Pangosvika mutengi achiwana kutenga, taura naye kuti akumbire mhinduro. Iyo inzira yakakwana yokuratidza vatengi kuonga kwako uye kunetseka. Iyi ruzivo ichakubatsira iwe kunzwisisa kana chigadzirwa chako chakakodzera zvinodiwa mumusika kana kwete. Uyezve, nekukumbira vatengi vako pamusoro pezvavanoziva, unogona kuvandudza bhizinesi rako uye kusimudzira kuvimbika kwevatengi.
Mutengo kuAmerica yako vatengi
Vose vashandisi vanogadzira zvigadzirwa kuAmazon vanogona kuonekwa seAmazon customers. Kuti uzviite ivo vatengi vako uye uwane mari yakareba yekutengesa, unogona kupa vatengi nekutora pane yavo inotevera kutenga. Uyezve, unogona kushandisa zvikwereti zvekutengesa uye kupaaways.
Tsvaga uchapupu hwevanhu
Usati watenga chimwe chinhu paAmazon, vatengi vanoongorora tsvakurudzo yemiti kuti vanzwisise kana vanogona kukuvimba iwe semutengesi akatendeka kana kwete. Ndicho chikonzero nei zvakakosha kukudziridza uchapupu hwemagariro evanhu nehutano hwakanaka uye hwehupenyu. Iva nechokwadi chekuti zvose zvakasikwa zvakafanana nokuti Amazon iri kutambura kukurudzira kusavhiringidza. Uye usafunga kunyange nezvekutenga mhinduro. Ichaparadza mukurumbira wako munguva pfupi. Nenzira yakanaka, pane nzira dzekuita maitiro akanaka ehupenyu pasina kuputsa mitemo. Somuenzaniso, unogona kupa vatengesi nehutano hwakakwana hwekambani uye zvikwereti zvakanaka.
Usakanganwa kushambadzira mabasa
Kana uri kutsvaga mikana yekutengesa zvakawanda uye uchida kutumidzirwa pamakwikwi ako, iwe inofanira kuisa muAmazon advertising. Iwe unogona kugadzira chikwata chekugadzirisa chikwata chekuratidza marimi ako pane TOP of Amazon search results page. Muchiitiko ichi, iwe uchada kubhadhara pamusana pekushandiswa kwemumwe munhu pane ad yako. Muchinda achavimba nehuwandu hwekukwikwidzana mukati memukati wako. Imwe nzira yekusimudzira chigadzirwa chako kuAmazambique ndechekugadzira musoro wekutsvaga ad. Ichi chikwata chichaonekwawo pane TOP yeAng Amazon tsvaga peji peji. Mhedzisiro yakakura pakati pehurukuro yekutsvaga kwekutsvaga uye chikwata chakatsigirwa chiziviso ndechokuti musoro wekutsvaga kwekutsvaga unotarisa pamusoro wepamusoro pemigumisiro yekutsvaga. Mune mamwe mazwi, unogamuchira mukana wekumira kunze kwevanhu uye kukwevera kukwira kwemotokari kuzvinhu zvako. Uye pakupedzisira, unogona kushandisa chigadzirwa chechiratidziro. Ichi chirevo chinowanikwa mubato rechetheni chekona kana vashandi vachiona tsanangudzo yeimwe chinhu.
Zvechokwadi, haasi nzira dzose dzeAmangicha kuzivisa dzichave dzakakosha iwe. Zvisinei, hauzombozivi kusvikira iwe uchiedza. Ndicho chikonzero iwe unogona kuedza imwe yeAngland inoshuwarisa maitiro zvichienderana nekutengeserana kwebhizimisi uye zvinangwa. Uye kana ikakonzera kudzoka kwakanaka pane utsinhanisi, zvino zvakakosha.
Amazon inguva yakawanda yekutsvaga magetsi emabhizimisi ose. Inogona kuva yekutanga kana imwe nzira yekuwana mari. Iyo inopa kwete chete kutengesa kutengesa uye kukurudzira kuwedzera kwekuziva, asiwo mukana wekutengesa zvinhu zvako pasi rose. Zvese zvaunoda ndezvekuita zvakakosha-mberi nokuda kwekushingaira kuitira kuti iwe umire kuti uwane purogiramu nebhizimisi rako idzva. Usarasikirwa nemikana yako chaiye yekuve mutengesi anogadzira uye kushanda pasi pekutsvaga kwemavara kuAmazon.